Isku aadka Isreeb-reebka Champions League oo berito la sameynayo iyo Man City oo ku aadi karta AS Roma ama… – Gool FM
Isku aadka Isreeb-reebka Champions League oo berito la sameynayo iyo Man City oo ku aadi karta AS Roma ama…
Byare August 4, 2016
(Manchester) 04 Agoosto 2016. Manchester City ayaa ciyaari doonta kulan labo lugood ah si ay u keensato booskeeda wareega group-yada ee Champions League maadaama ay ku dhammeysatay kaalinta afaraad ee Premier League kal ciyaareedkii tagay.
Camaaliqada Talyaaniga ee AS Roma kuwaa oo ku dhammeystay kaalinta saddexaad ee Serie A xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ayaa laga yaabaa inay ku aado kooxda Pep Guardiola.
Naadiga Monaco ee dalka Faransiiska, Young Boys, Rostov iyo Steaua Bucharest midkood ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku aadaan kooxda hantida badan ee Man City marka berito la sameeyo isku aadka isreeb-reebka Champions League.
Roma ayaa ah kooxda ugu adag ee cal-wasaadka ku ridi karta Man City haddii ay berito ku soo aado halka naadiga Monaco qudhooda aysan dab yar shideyn.
Marka berito la sameeyo isku aadka ayaa waxaa kulamada is araga labo aflaha ah la kala ciyaari doonaa August 16 – 17, iyo August 23 – 24, kooxda soo guuleysata ayaa toos uga qeyb gali doonta wareega group-yada ee Champions League halka kooxda laga adkaadana ay aadi doonto Europe League.
Isku aadka tartanka Champions League ayaa isna la sameyn doonaa 25-ka bishan Agoosto.
TOOS u daawo: Mexico vs Germany - LIVE
“Qamaar ma ahan inaan ka soo tagay Leicester City kuna soo biiray Chelsea.”. Kante